I-CHIP Ikhompyutha encinci ye-9 Dollars - Geofumed
I-CHIP Ikhomputha ye-Micro ye-9 idola
Meyi, 2015 ezintsha
Yintoni eya kwenzeka xa bekuxelele ukuba i-dollar ye-9 unokufumana ikhompyutha ubukhulu bhokisi yokufanisa onokuyenza:
Ukukhangela i-Intanethi ngokuxhumeka kwe-WiFi.
Xhuma imouse kunye nebhodibhodi ngeBluetooth.
Xhuma i-monitor nge-HDMI okanye i-VGA.
Xhuma kwi-TV uze usebenze imidlalo ye-retro.
Yenza i-Excel routines, iZwi, usebenzisa i-Free Office.
Abadali beli ngcamango bafana nalabo abaye bakhulisa kwiRickstarter 70,000 dollar, kunye neKhamera ukudala ii-GIF eziphilileyo. Ngokwahlukileyo, ngeli xesha iinjongo zakhe zaziyi-dollar ye-50,000 ecwangcisiweyo kwithuba leentsuku ze-30 zagqitywa ngeeyure ezingama-24 kuphela. Ngaloo Mgqibelo lowo ndadla i-hamburger nabantwana bam babe ne-$ 250,000, ngoMsombuluko bephezulu kwiidola ze-865,000 kwaye ekugqibeleni baqokelela ngaphezu kwe-2 yezigidi.
Kuba nabani na onokubonakala ngathi uyidokodo engadingekile, ecinga ukuba akuyena wonke umntu othanda iLinux, inkqubo yokusebenza ifakwe kwisixhobo esincinci. Basenokucinga ukuba amandla aphelelweyo: 1 GHz yeprojekti, i-512 MB ye-RAM kunye ne-4 GB yokugcina. Ncinane encinci kuneRispberry kodwa nangombono obanzi ngokuxhuma kunye ne-Linux version.
Kodwa ubungqondi yale projekthi ayikho kuphela ixabiso intonga USB banetheko Computer Micro, kodwa hardware zayo zombini kunye software Umthombo Open, nenokuthi zijongene isiqalo esitsha kukhuphiswano ukuthengisa iiinguqu eziphuculweyo ze-microcomputer zingezantsi kweedola ze-100. Ukuba ngaba ndiyi-HP, ndiza kuthenga inguqu yabaculi abaya kulungela ngo-Septemba kule 2015, ukuze bafike phambili kokhuphiswano oluza kuza.
Iminyaka eyi-25 edlulileyo, becinga ukuba uMthombo ovulekileyo uza kuba yoshishino oluzinzileyo, wayekhohlisiwe. Namhlanje thina bayothuka ukubona indlela Geoserver, WordPress, QGIS, ukunika imizekelo, izisombululo ezizinzileyo ukuba wonke umntu benze ushishino kwaye akhuphisane noba ancamisayo nabo kwiinkalo ezininzi izixhobo wezindlu. Mhlawumbi lifikile ixesha Hardware Open Source kuyo umbhali, kuba nangona akakafiki masificarse ukususa iinkampani ukwenza izisombululo zikhuphisana brand ezinkulu.
Amanani ayabanda ukususela ekuqaleni: Kwiintsuku ze-5 zokuqaliswa kweprojekthi, aba bafana badlula amaxesha e-17 yabo injongo yokuqala. 9 zabashumayela iidola kanye ngenyanga kaDisemba siye safumana CHIP wethu 2015 ukubonisa owangena iphakheji elandelayo amacandelo 5,000 kwafuneka alinde kwinyanga ezayo imveliso (Januwari 2016). Nangona i-HDMI, i-VGA kunye neenguqu eziphathekayo ziza kuba kude kunyaka, ngasekupheleni kukaJuni we-2016.
Ngale qoqo, abafana bafumana imali yengxowa-mali kunye nento abanokuyenza ngayo inzuzo ngaphezu kwenkqubo. Okwangoku, banzima ukuhlangabezana namaxesha kule nguqulo yokuqala, ukususela ngomhla wesihlanu i-17,000 yayineentengo zokuthenga.
Ngomsindo baye eyenziwe iziza zempembelelo enkulu, ngokuqinisekileyo kufuneka abaleke ukuqesha geofumado resource ukubanceda kudibana imfuno yokuba 2016 kungabi ngenxa yale uguqulelo kwakudala kodwa ekhuphisanayo nxamnye ukulindela abasebenzisi angavuma hlawula i-dollar ye-59 ngemisebenzi eyongeziweyo, njenge-disk ngaphezulu, imemori eninzi kunye nesithembiso esinokwenzeka sokuthi inkxaso ye-Windows 10 njengoko inikezele Raspberry PI.
Lo kwakuyiprojekthi yokuqokelela ye-CHIP
Le webhusayithi ye-Getchip nkampani
Post edlulileyo«Edlulileyo Vula ifayile yeGML ngeQGIS kunye ne-Microstation
Post Next Ukwakha i-Dron, iprojekthi yezesayensi yamOkulandelayo "